Weddings 2022 - Ny fironana lehibe amin'ny haingo | Bezzia
Fironana lehibe amin'ny haingo mariazy 2022
Susana godoy | 13/05/2022 16:00 | fampakaram-bady
Efa manomboka ny mariazy 2022, noho izany dia tsy maintsy fantatsika hoe inona ireo fironana lehibe amin'ny haingon-trano izay miparitaka. Satria azo antoka fa hanome anao andian-kevitra izy ireo mba ho afaka hanentana ny fampakaram-bady ao aminy. Raha fironana izy ireo, dia manimba ary safidy hanome be dia be ny resaka.
Noho izany, raha tianao izany rehetra izany amin'ny andro lehibenao, dia tsy afaka ny tsy hihaona amin'izy ireo ianao. Marina fa ny zavatra rehetra manodidina ny fampakaram-bady dia tena manokana. Noho izany ny tsara indrindra azontsika atao dia raiso ho aingam-panahy ireo fironana ireo ary ampio amin'ny mariazy arakaraky ny tsirontsika. Azo antoka fa azonao atao ny mampifanaraka azy ireo amin'ny zavatra noeritreretinao ho an'ny andro manan-danja indrindra!
1 Loko maivana sy voajanahary ho an'ny mariazy 2022
2 Entin'ny jiro mihantona ny jiro
3 Tabilao mitambatra amin'ny haingon-trano mariazy 2022
4 Miloka amin'ny fandaminana ny vahiny amin'ny fomba tany am-boalohany
Loko maivana sy voajanahary ho an'ny mariazy 2022
Ny lohahevitry ny loko dia iray amin'ireo fanehoan-kevitra be indrindra. Saingy amin'ity tranga ity dia toa mihamafy ny fanoloran-tena amin'ny tonony tsy miandany. Noho izany ny loko fotsy sy beige ary maivana kokoa dia hanampy amin'ny palette misy safidy. Satria ny zavatra tianao hotratrarina dia toerana voajanahary kokoa, mifandray amin'ny zavaboary manodidina antsika. Noho izany antony izany dia hamela ny loko manaitra indrindra isika mba hahatonga ny habaka voalanjalanja kokoa. Mazava ho azy fa raha te-hanampy loko marevaka ianao, dia fantatrao fa azonao atao ny mampifanaraka azy io amin'ny tsironao.
Entin'ny jiro mihantona ny jiro
Ny jiro dia iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny fandravahana fampakaram-bady. Satria azontsika ampiasaina izany mba hanomezana lanja bebe kokoa ny fanasambe. Manohy ny famaranana voajanahary, miatrika safidy aiza isika jiro mihantona no ho tena mpandray anjara. Saingy tsy dia manjelanjelatra loatra izy ireo, fa hanana vera vita amin'ny fitaratra izy ireo izay mahatonga azy hanana endrika kanto indrindra. Mazava ho azy fa ny labozia koa dia lasa iray amin'ireo antsipiriany tena ilaina. Mba tsy hisian'ny olana dia azonao atao ny mametraka azy ireo ao anaty vazy fitaratra, manome rivotra be pitsiny kokoa ny haingon-trano.
Tabilao mitambatra amin'ny haingon-trano mariazy 2022
Nandritra ny taona vitsivitsy izao, te-hisaraka amin'ny protocol izy ireo. Koa satria ity zavatra manana latabatra lava ity, misaraka amin'ny mpivady vao, dia tsy zavatra foana no tiana amin'ny tranga maro. Noho izany, mety misy fitambarana latabatra lava sy boribory. Ankoatra izay dia efa elaela ihany no nanaovany izany ary hita fa mbola hitohy hatrany izany. Ankoatra izany, tsy miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny foana ny mpivady, fa isaky ny mahita ianao fa eo amin'ny latabatra irery. fa mifanakaiky kokoa amin’ny vahiny, na amin’ny samy izy aza. Tsy maintsy misafidy foana izay mety amin'ny mpivady tsirairay ianao, saingy marina fa ny protocole dia toa avela.
Miloka amin'ny fandaminana ny vahiny amin'ny fomba tany am-boalohany
Lasa ireo latabatra nisy isa ireo ary nisy vahiny maromaro tao amin'izy ireo. Eny, ny originality dia napetraka amin'ny fampakaram-bady manaja tena. Noho izany, raha tokony ho ireo isa ireo dia azonao atao foana ny mametraka azy ireo mametraka ny lohatenin'ny hira na sarimihetsika eny amin'ny latabatra tsirairay ary na ny anaran'ny mpilalao. Ny zava-drehetra dia mandeha raha toa ka mameno ny hevitra amin'ny fomba tena izy. Toa ny fanavaozana isan-taona dia eo anilantsika ary miaraka amin'ny eritreritra kely dia mbola mety hahomby kokoa izy ireo. Toy izany koa, azonao atao ny mametraka bosoa foana izay hamoahanao ny lisitra manontolo miaraka amin'ny anarana na, eo amin'ny latabatra tsirairay, asio antsipiriany izay mamaritra ny anarany. Tsy toa hevitra tsara ve izany? Avy eo ianao dia afaka mandeha amin'ny haingo fampakaram-bady 2022
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » fampakaram-bady » Fironana lehibe amin'ny haingo mariazy 2022
Lavaka afo ivelan'ny trano hanomezana hafanana ny patio na ny zaridainanao